WPS Office Alpha 15 misy amin'ny fanovana vitsivitsy | Avy amin'ny Linux
WPS Office Alpha 15 misy amin'ny fanovana vitsivitsy
marianogaudix | | fampiharana
Kingsoft Office Alpha 15 dia efa misy ankehitriny ary miantso ny anarana hoe WPS Office Alpha 15. Nanapa-kevitra ny hampiasa ny anarana tany am-boalohany ny vokatra sy ny orinasa any Andrefana ny orinasa sinoa.
1 Inona no vaovao ao amin'ny WPS Office Alpha 15:
2 WPS Office Alpha 15 misintona:
Inona no vaovao ao amin'ny WPS Office Alpha 15:
WPS Writer dia mitondra fanohanana amin'ny famerana ny fanovana.
Afaka mamerina ny toerana fanovana farany ny WPS Writer rehefa manokatra ny antontan-taratasy ianao.
WPS Writer dia manohana ny varavarankely misaraka mba hamakiana mora.
WPS Writer dia manohana endrika endrika sarotra.
WPS Spreadsheets dia manohana ny fizarana boky asa izao.
WPS Spreadsheets dia manome toro-hevitra rehefa manoratra fiasa iray.
Ny takelaka WPS dia manohana ny fikarohana / fanoloana endrika.
WPS Spreadsheets dia manohana ny fanamarinana ny lesoka momba ny raika.
Manana olana amin'ny trano famakiam-boky Embarcadero Delphi izay ampiasainy amin'ny rindrambaiko misy azy io ny orinasa. Ny kaody voasoratra amin'ireo tranomboky ireo dia tsy misy afa-tsy amin'ny Windows ihany, ka tsy maintsy ampifanarahana amin'ny GNU / Linux sy Mac OS. Mila fotoana izany.
Manoro hevitra anao aho hamaky ity tatitra manaraka ity avy amin'ny Roger Luedecke.Ao amin'ny tatitra nataon'i Roger luedecke , dia milaza amintsika momba ny fanampiana omen'ny Canonical ny Office WPS hanolo ny Microsoft Office ao amin'ny OEM
WPS Office Alpha 15 misintona:
Sintomy ny Office WPS
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » WPS Office Alpha 15 misy amin'ny fanovana vitsivitsy
78 hevitra, avelao ny anao
mat1986 dia hoy izy:
Iray amin'ireo mampiasa WPS Office aho hamoronana antontan-taratasy. Tena mandeha tsara izany, hoy aho hoe tsara kokoa noho ny Libreoffice. Tiako raha ampidirina amin'ny alàlan'ny default ao amin'ireo distro malaza indrindra 🙂
Valio ny mat1986
Tsy lozisialy maimaimpoana izany ary avy amin'ny orinasa sinoa izy io, ho toy ny hoe mametraka lalao xbox amin'ny famoahana xD rehetra ny Linux, mifamatotra amin'ny fetran'ny orinasa izany. tsara kokoa hampidina azy ary izao
Qvic dia hoy izy:
Fanontaniana. WPS lisansa inona no ampiasainao?
Ary inona ny fahasamihafana, ankoatry ny fijerin'ny Candy M $, misy ifandraisany amin'ny Libre-Office?
Mamaly an'i Qvic
99% no mifanaraka amin'ny birao mihoatra ny libreoffice
Eny, izany no iray amin'ireo zavatra omeko ny LibreOffice, ny fomba anaovan'ny rakitra M $ Office baolina.
Fa hey, ireo izay ivelan'ny fenitra dia izy ireo.
marianogaudix dia hoy izy:
Araka ny nolazain'i daryo dia 99% ny birao mifanaraka.
Izy io dia manana interface interface roa, ny iray mahazatra toy ny Office 2003 sy ny Office 2013 UI.
Izy io koa dia mitondra fiasa bebe kokoa noho ny LibreOffice.
Ny interface dia mahafinaritra kokoa satria vita amin'ny Qt.
Ny interface LibreOffice dia mampiasa tranomboky namboarina nantsoina hoe tranomboky VCL izay tsy manana
mamatotra an'i Qt na Gtk.
Mamaly an'i marianogaudix
Na izany aza, raha tsy izany dia tsy tonga amin'ny fitenintsika izy, noho izany dia tsy safidy hafa izany
oscarx dia hoy izy:
Tsy safidy hafa ho an'ireo izay tsy mamaky amin'ny teny Anglisy izany, fa ho an'ny ankamaroantsika dia.
Mamaly an'i oscarx
Andao hojerentsika raha mamoaka kinova 64-bit sy amin'ny Espaniôla ...
Cristianhcd dia hoy izy:
Tsy hitako izay dikany amin'ny fangatahanao, na dia excel aza, tsy mihinana ondrilahy 3 gig amin'ny tranga ratsy indrindra, satria mianjera amin'ny habibiana amin'ny tsanganana andalana, raha izany dia ampiasaina ny fidirana, izay misy mpivady an'arivony tapitrisa -Tsy mahatratra 3GB ram koa ny tsanganana ... ankehitriny, raha mampiasa 64bit excel ianao dia manana olana mifanentana amin'ireo fiasa sy fandaharana "programmable" marobe izay efa namboarina tamina fotony fahitana, mampiasa 32 bits
Mamaly an'i cristianhcd
Raha azoko tsara, 10 bits efa teo nandritra ny 64 taona, tsy misy dikany ny fametrahana amin'ny tontolo 64-bit madio, fonosana 150 hahafahana mametraka rindranasa 32-bit ..
PS: ny kajy miverina amin'ny latabatra ... amin'ny 64 bits dia haingana kokoa ..
Miombon-kevitra aminao aho, @ x11tete11x, satria ny fiasa amin'ny 64-bit dia manatsara ny fahombiazan'ny PC (voamariko fa rehefa mampiasa Windows 8 32-bit miaraka amin'i Debian Wheezy 64-bit aho, ary ny marina dia naharitra ela kokoa ny netbook-ko miaraka amin'i Debian 64-bit).
Manontany tena aho, raha ny amiko, wps-office 32 bits dia miasa haingana kokoa noho ny libre-office amin'ny 64-bit.
Ireo mpandrindra WPS Office dia miasa amin'ny WPS Office 64 bit ho an'ny linux.
wps forum fiaraha-monina
birao wps 64 bit (sary)
Hapetrako hizaha toetra azy, maivana kokoa ny endriny
Napetrako tao amin'ny netbook-ko izany ary ny marina dia mandeha tsara izy io.
PS: mitsidika aho.
Elio dia tsy fahita firy fa any Muy Linux dia tsy misy izany vaovao izany. Ho ahy dia tsy mamporisika ny LibreOffice fotsiny ny Muy Linux. Ahoana no fahitanao azy?
Tsy afaka nilaza taminao aho, fa ny MuyLinux tsy mbola nahita ekstremista tamin'io lafiny io aho. Angamba tsy nanam-potoana hampielezana azy i @metalbyte.
Tsy misy odt, tsy misy fety dia hoy izy:
Tsy izany velively, mamporisika ny rindrambaiko tompona misimisy kokoa i muylinux, sa tsy mbola hitanao ny miavaka amin'ny lalao, ohatra?
Valiny amin'ny No odt, tsy misy fety
Fantaro izay lazainao, satria eto dia ny lozisialy fananana eto an-toerana dia ampiroborobo amin'ny fomba firesaka rindrambaiko maimaimpoana, noho izany dia demagogika ny fototra iorenanao.
Zavatra iray hafa: ny olana amin'ny LibreOffice dia ny tsy fahafahany mampiseho tsara ireo rakitra OOXML noho ny fahamoran'ny kolikoly rehefa manonta ireo antontan-taratasy izay mbola tsy vita na novaina tao amin'ny suite an'ny Microsoft Office (zavatra iray nahombiazan'ny WPS nandresy ny Office).
Ary raha ny fanazavana, fantatrao ve raha efa azo amidy any Amerika Latina ny solosaina finday Leemote?
Tsy tranokala rindrambaiko maimaimpoana ve ity?
Iza no nilaza izany? Ny teny filamatray dia Andao hampiasa Linux ho afaka.. fa tsy, Andao hampiasa Linux satria Taliban isika ary Rindrambaiko Maimaimpoana ihany no ampiasaintsika… Ary ny fahalalahana dia miankina amin'ny fahafaha-misafidy raha te hampiasa rindrambaiko misokatra na mihidy ao amin'ny GNU / Linux 😉
openas dia hoy izy:
Mampalahelo fa na dia ao anatin'ny rindrambaiko maimaimpoana aza dia maheno matetika io fehezan-teny tokony tsy hahomby io ianao, mila famakiana fotsiny izany. Ny tiako holazaina dia hoe 'ny fahalalahana dia midika hoe afaka misafidy ny hampiasa rindrambaiko tompona'. Ny mpampianatra hanapa-kevitra ny hifehy tena dia tsy mifanitsy amin'ny famaritako ny 'fahalalahana'. Na izany na tsy izany, ny tranonkala natokana hanaparitahana rindrambaiko maimaim-poana dia tokony hanaparitaka ny soatoavina manohana azy, ary raha misy vokatra ara-pananana tsara kokoa ho an'ny safidy hafa maimaim-poana, dia tokony hanao izay rehetra azo atao izy ireo mba hangatahan'ny mpampiasa hamoaka azy io na hametraka ny ezaka hanatsarana ny safidy maimaim-poana.
Notsapaiko ny biraon'ny WPS nandritra ny volana maromaro, ary azo inoana fa toa mailaka sy maivana kokoa noho ny freffice / openoffice io, tsy azoko natao ny nanandramana ny hatsarany amin'ny fifampiraharahana amin'ireo rakitra M $ birao.
Na izany na tsy izany, mandra-pamoahana azy dia tena mandeha tsara tokoa ny Libreoffice ary isaky ny mandalo ny fotoana dia mandeha tsara kokoa izy io.
Mamaly amin'ny Openas
Ry namako, angamba somary henjana noho ny ahy ny famaritanao ny fahalalahana, ary heveriko fa raha te-hamatotra ny tenako aho dia tsy maintsy manana izany, na mila manana fahalalahana sy zoko hanao izany. Nampiasa ny GNU / Linux nandritra ny taona maro aho ary mbola tsy anisan'ireo mpihatsaravelatsihy izay nilaza fa tia ny zava-drehetra maimaimpoana ary mampiasa codec audio sy horonantsary fananana, ohatra. Efa nolazaiko foana io, raha mila zavatra nakatona aho, nefa mety izany dia ampiasaiko. Amin'ny farany, tsy iray amin'ireo mandray ny kaody loharano amin'ny zava-drehetra aho ary mijery izany. WPS Office dia Office Suite tena tsara, napetrako miaraka amin'ny LibreOffice ary ampiasaiko arakaraka ny zavatra ilaiko ny tsirairay avy, ary raha marina aho, tena tsara tarehy ary tena mandeha tsara ka tsy raharahiko na maimaim-poana na tsia.
Zavatra iray ny fampiasana rindrambaiko mihidy, saingy mamela ny fampiasana azy io nefa tsy mandoa vola (Opera, Chrome, Office WPS ... sns), ary iray hafa hamaky sy hampiasa isa serial. Heloka bevava izany. Amin'izao fotoana izao dia tsy tadidiko ny lahatsoratra avy amin'ny DesdeLinux izay mampiroborobo ny fanaovana piraty na ny fampiasana ny lozisialy amin'ny alàlan'ny triatra sy serial, noho izany, mieritreritra aho fa nanaparitaka izay ilaina fotsiny isika .. Mety ho diso izany, mety tsy izany, fa ianao kosa maimaim-poana mieritreritra izay tadiavinao momba azy. 😉
Tsy ny maha-Taliban anao na tsia. Raha ny marina, tena mahasosotra ahy ny maheno ilay teny hoe "Taliban" izay manamafy hatrany ny heviny manoloana ny zavatra inoako momba ny rindrambaiko. Raha ny tena izy dia hitako fa tsy fandeferana be kokoa ny fiantsoana ireo izay henjana kokoa amin'ny fampiasana rindrambaiko maimaim-poana ho Taliban toy izay ho toy izany.
Etsy ankilany, ny zavatra noresahina dia mifandraika amin'ny fanantenana andrasana amin'ny mpamaky bilaogy, satria raha tsy mieritreritra isika fa misy izy ireo, dia ho mpamaky isika dia afaka manantena fa amin'ny andro sasany dia hisy famoahana izay hampiroborobo ny programa toa izany toy ny Microsoft Office Adobe Photoshop, ohatra. Raha izany, inona ny desdelinux, tranonkala iray mifandraika amin'ny rindrambaiko amin'ny ankapobeny?
Izany rehetra izany dia marihiko tsy misy fanafohezana, mba hanasongadinana ny lafiny iray izay toa zava-dehibe amiko ny manamboatra azy.
Miala tsiny, Leo, fa ho ahy ny teny hoe "Taliban" na "fanatisme" dia tsy maharaka ny fihetsiky ny olona sasany, na dia nanondro anao ho iray tamin'ireny aza aho. Ny faharesen-dahatrao, ny finoanao, na izay tianao hiantsoana ilay lozisialy dia manakana anao tsy hampiasa ny Office WPS na fampiharana mitovy amin'izany, noho ny tsy fisian'ny loharano misokatra, azoko tsara izany ary mendrika ny hoderaina mihitsy aza, fa indraindray ny faran'izay mahery ratsy
Nataoko mazava tsara ny fihetsiko momba an'io lafiny io amin'ny valinteniko amin'ny openas (izay tsy midika hoe ny fihetsika sy ny tanjon'ny DesdeLinux), ary averiko indray, tsy tadidiko ny nahita lahatsoratra tokana tao amin'ity bilaogy ity izay mivantana na tsia. manohana ny Rindrambaiko manana. Saingy ny zava-misy dia iray ihany, misy ny olona manana Free Software tsy afaka manao na inona na inona, satria na iza na iza miteny amiko fa aleony mampiasa mpamily maimaim-poana amin'ny karatra NVidia na ATI, na dia ratsy kokoa noho ny an'ny mpamily tompony aza izany, hoy aho azy ireo fa mpandainga mpihatsaravelatsihy amin'ny marika lehibe izy na amin'ny tranga farany, masochist. Fa ahoana raha mbola marina io, dia fanapahan-kevitra tena manokana fa tsy ny rehetra no tokony hanohana.
Manontany anao aho, mampiasa codec audio sy video maimaimpoana ve ianao? Ao amin'ny .ogg daholo ve ny mozikanao? Ary endrika manao ahoana ny horonan-tsarinao? Tena tsy mampiasa loharano nikatona ve ianao? Raha asehonao ahy fa afaka 100% ny solo-sainanao (tsy azoko antoka, satria tsy tokony ho loharano misokatra ny fitaovany) dia afaka tsy hiraharaha izany resaka izany aho.
Araka ny nolazain'i Elav, ny fahafahana misafidy rindrambaiko hampiasa, na maimaim-poana izany na tsia, dia Freedom. Raha toa ianao, na iza, milaza amiko fa mila mampiasa rindrambaiko Maimaimpoana sy endrika fisie maimaimpoana aho (na Ogg, WebM, Theora, ODT, sns) 100%, dia esorinao amiko ny fahafahako manapa-kevitra sy eritreritra, izay aorian'ny rehetra, izy ireo no zava-dehibe indrindra amin'ny fahalalahana rehetra. Mampiasa rindrambaiko maimaimpoana sy endrika maimaim-poana aho isaky ny afaka manao izany. Ny ankamaroan'ny fanangonako mozika dia amin'ny mp3, afa-tsy ireo izay ripako avy amin'ny CD na bass Jamendo, izay Ogg; Milalao kilalao maimaim-poana aho (toa ny Supertux Kart, Open Arena, Battle for Wesnoth, 0 doka) ary ny lalao tsy maimaim-poana (izay miharihary amin'ny sasany amin'ireo fidirako Steam) ary mihaino mozika maimaim-poana alaina ao amin'ny Jamendo aho, sy ireo sary dia i Nvidia miaraka amin'ireo mpamily tompony, izay i Nouveau, na dia mihatsara sy mihatsara aza izy ireo, dia mbola manana fomba handeha ihany. Raha nanao karatra sary i Intel, na nanome ny safidin'ny orinasa hafa hanao ny azy ireo amin'ny fampiasana ny chipset-ny (toa ny ataon'ny AMD sy Nvidia) dia hividy aho raha hitako fa manana fahefana ampy izy ireo. Ankoatry ny sary, ny hany hany mila mpamily tsy miankina dia ny DTT tuner-ko, izay kely hampiasako azy (ary rehefa afaka taona maro dia mbola miasa ihany izy io, eny fa na dia ny HD DTT, izay azoko rehefa nanomboka io) dia mandeha izy ho ahy.
Angamba amin'ity no hanombohantsika flamewar hafa, saingy mieritreritra aho fa mety ny maneho ny fomba fijeriko amin'izany rehetra izany.
Amin'izao fotoana izao dia tsy manana zavatra holazaina intsony aho. Malalaka ny tsirairay hanome ny heviny izay tiany, raha tsy izany dia tsy fahalalahana marina izany.
Ho fanajana ny warez:
Ny bizina warez dia tsy mitondra soa be ho an'ny mpanao keygen na mpihaza cracker. Izy io dia miantoka fiankinan-doha bebe kokoa amin'ny rindrambaiko manana izany, na dia mianiana aza izy ireo fa heloka bevava izany.
Zavatra iray hafa: tsy hentitra toa an'i Autodesk (mpamorona AutoCAD) i Microsoft, Adobe (orinasan-tsarin'ny Photohop, Illustrator ary Flash vao tsy ela) ary / na rindrambaiko Flexera (mpihazona ny lozisialy fonosana). matihanina an'ny rindranasa ho an'ny Windows InstallShield), ary ny marina dia ny tanjon'ny fanalefahana ny rafitra fampahavitrihana shareware dia ny hiteraka fiankinan-doha amin'izy ireo, ary amin'izany hanidy ny paradigma an'ny rindrambaiko tompona (jereo East Trio de lahatsoratra amin'ny miampy ity avy amin'ny mpitantana an'ity tranonkala ity).
PS amin'ireo admin: Raha toa noho ny Spam ity fanehoan-kevitra ity dia mampahatsiahy anao aho fa noho ny habetsaky ny rohy niantsoako izany.
Morpheus dia hoy izy:
Ary nianjera tamin'ny "Taliban" sy ny fifanjevoana nahafaly teo amin'ny "fahalalahan'ny rindrambaiko" sy ny "fahalalahana misafidy" izay mampisaraka ny vondrom-piarahamonina (tsy lazaina intsony ny fikorontanana "Malalaka / Malalaka").
Fantatra ary mazava ho azy fa ny olon-drehetra dia manana fahalalahana hampiasa ilay rindrambaiko tadiaviny, hamoaka ireo lahatsoratra tadiaviny ao amin'ny bilaoginy, sns.
Ankehitriny, momba ny fiampangana ny "Taliban ara-pinoana" noho ny fanolorany hevitra na ny fanomezana hevitra fa hifanaraka kokoa amin'ny foto-kevitry ny bilaogy mba hanohanana ireo fomba hafa maimaim-poana mifanohitra amin'ireo an'ny tsy miankina, mieritreritra aho fa mifono fanamavoana tsy misy antony izany. Na dia mbola tsy "mahatalanjona" sy mahasoa ampy aza ny fampiharana maimaim-poana, tsy ratsy, na Taliban, na mpivavaka, ny mihevitra fa tokony, avy amin'ny "fiarahamonina", no tokony hampirisika ny fanatsarana azy ireo (ary tsy maninona raha handeha vakio ny kaody na tsia, ny zava-dehibe dia ny fahafaha-manao / fahalalahana manao izany raha iriko).
Raha tsy noho ireo "taliban maloto" androany ireo dia voatery hampiasa an'io "damn" Window $!
Mamaly an'i morpheus
Andriamatoa sambo dia hoy izy:
Azoko lazaina fa miombon-kevitra amin'ny roa tonta aho. Mpiaro mafy ny fahalalahana misafidy aho, ambonin'izany rehetra izany no mankahala ahy milaza amiko izay azoko atao na tsy azoko atao noho ny filozofia, moraly, politika, foto-pinoana ...
Tsy haiko hoe ahoana no holazaina etsy ampitan'ny dobo misy anao io, fa amin'ny fiezahana mora vidy dia holazaiko ireo rehetra manohitra an'i Debian main satria "manolotra repository PRIVATIVE DIVONICA (TSY MISY MPIANATRA DEFAULT)" izay " ho any amin'ny helo izy ireo ". Ho ahy dia tsy misy fitsinjarana tsara kokoa noho izay tsy mizara afa-tsy lozisialy 100% maimaim-poana ary ahafahan'ny repo faharoa ho an'ny zavatra rehetra izay tsy misy ary misy lahatsoratra be dia be momba ny loza ateraky ny rindranasan'ny sasany, toy ny fisavana sy fitsikilovana ny tantaran'ny firefox amin'ny ampahany amin'ny Skype ao amin'ny Linux, izay lazain'ny wiki OpenSUSE.
Fahalalahana rindrambaiko? foana, ho ahy ny safidy tsara indrindra.
Fahalalahana hametraka mpamily tompona trano sy izay tianao? Mandrakizay ihany koa, satria tsy raharahan'Andriamatoa Stallman na ny fangatahana masina ataony no ataoko amin'ny solosainako.
Valiny tamin'i Andriamatoa Boat
@morfeo Tsy nisy olona niampanga mpampiasa iray hafa ho Taliban.
Makubex Uchiha dia hoy izy:
Ny biraon'ny WPS dia tsara kokoa noho io fako avy amin'ny libreoffice xD lazaiko foana io fa tsy maintsy alamina rindrambaiko ny mahasoa azy fa tsy manome dikany ny maha maimaim-poana na mihidy azy !!!
Mamaly an'i Makubex Uchiha
Juanra20 dia hoy izy:
Izy io dia tranokala iray momba ny Linux (GNU / Linux), izay rindranasa rehetra misy ho azy dia azo avoaka / resahina ato amin'ity bilaogy ity ... Ho ahy, ny bilaogy dia momba an'io fa tsy elav sy ny kazekage hoy izy ireo
Mamaly an'i Juanra20
Manaiky tanteraka, fa ny zavatra ratsy indrindra dia tsy fantatsika raha toa ka eo am-pelatanan'ny governemanta sinoa ireo antontan-taratasy novokarin'ny WPS.
Andeha hojerentsika, ny governemanta sinoa dia tsy liana afa-tsy ny fitsikilovana ny olom-pireneny fa tsy misy zavatra hafa (satria ny ambiny dia ny NSA ihany sy ireo mpitsikilo sasany any Andrefana). Nojereko fa rehefa mampiasa ny mpanjifa fandefasana hafatra eo noho eo Tencent QQ.
Jose Sant dia hoy izy:
Misy mahalala ve raha efa manohana sary ny WPS Spreadsheets? Io no hany zavatra manakana ahy tsy afaka mampiasa azy io amin'ny alàlan'ny default, ary manoro hevitra azy, mazava ho azy.
Valiny tamin'i José Sant
Izaho manokana dia hitako fa io no birao fanoloana tsara indrindra ... izay rehetra ampidiriny dia miasa, ary tena tsara, ary izay tsy, tsy ao anaty vokatra; zavatra izay tsy takatry ny libre-openoffice [ny lisitra ofisialin'ny fampiasa andoavana ary ny fampitahàny izany amin'ny fivarotana vokatra ambonimbony kokoa: splat], raha fadiranovana na mavesatra ny birao manoloana ny birao ms, raha ilaiko izany, dia mampiasa biraon'ny ms ary tsy mihifikifi-doha aho.
Izay ihany. Ny ribbon dia efa nanery anay hanadino ny paradigma Office 97 taloha ela be.
Ubonto dia hoy izy:
Moa ve tsy nisy nahatsikaritra ny "vintana" manohana an'ity rindrambaiko ity ny Ubuntu fa tsy ireo safidiny maimaim-poana ?? !!. Tena manontany tena ny amin'ny fomba filatsahan'ilay orinasa amin'ny tompony ... mitady hamadika ny Ubuntu ho rafitra mihidy amin'ny fotony maimaim-poana! (ho an'ny Android) ... Toa ny fironan'ny orinasa ... Orinasa ratsy.
Mamaly an'i Ubonto
Misy ireo milaza fa rehefa "matotra kokoa io" ary te hampiditra azy io amin'ny alàlan'ny default i Ubuntu, dia ho tonga openource izy ireo .. fa he, tsy maintsy hahita isika
Malahelo ny Libre-Ofifce aho; Open-Office izay na eo aza ny asa rehetra vitany dia "manome ahy ny fahatsapana" fa tsy nisy olona tena tia azy mihitsy. Toy ny nalemy ara-potoana.
Saika amin'ny distro rehetra izy io satria mandeha ary feno dia feno, saingy ... tsy fantatro, tsy mbola nahita olona manana T-shirt manana ny logo OpOffice aho. Miaro azy io isika (raha manao izany) satria efa ela no niarahantsika fa efa ao anatin'ny fianakavian'i Linux izy, tsara ... tsy zatra izany.
Saingy misy Alfa avy amin'ny orinasa sinoa efa misasaka birao misokatra.
Miala tsiny amin'ny OffTopic, mandoko ny filôzôfia aho.
ambanin'ny hood, ny asan'ny tonian-dahatsoratry ny takelaka sy ny takelaka dia azo ampitahaina amin'ny rafitra birao na 2003, miaraka amin'ny fanemorana 10-11 taona eo ho eo, manamarina izany amin'ny hadalana foana izy ireo, eo amin'ny interface tsara, saingy tsy izany ... raha ny marina , lotus symhony sy caligra dia nanana interface tsara dia tsara, ary tsy mitovy amin'ny ribbon, saingy naharitra am-polony maro vao nandray ny lanjan'izy ireo ny malalaka, hitako fotsiny ny fanovana sasany nalaina avy amin'ny synphony [nalaina avy amin'ny openoffice novolavolain'i ibm ary nilaozana]
Izany dia ho hevitra iray miasa tsara ny Open / Libre Office, mavesatra kokoa ny rakitra ary tsy mbola nahita zavatra tsy hitako tao amin'ny Office aho.
Na ratsy tarehy na tsara tarehy, dia tsara amiko izany satria minimalist ary ianao ratsy tarehy, fa ny hevitra dia toy ny boriky, samy manana ny azy.
Amin'ny lafiny teknika, ny ODT dia marobe kokoa noho ny OOXML. Na izany aza, manana olana izahay: any Amerika Latina dia miankina tanteraka amin'ny OOXML izahay, ary indrisy, raha tsy misy rindrambaiko - na dia malalaka toy inona aza - izay tsy mahazaka ny fenitra Microsoft havia sy havanana dia tsy hanompo antsika izany. Fantaro izany.
Vicente dia hoy izy:
Salama namana avy amin'ny DesdeLinux,
Haiko ny misintona sy mametraka ny Office WPS amin'ny Ubuntu, saingy hitako fa manana ny interface amin'ny Espaniôla ianao. Ahoana no nanaovanao azy?
Valiny tamin'i Vicente
Mamaly ny tenako aho. Angamba olon-kafa no hahita fa mahasoa azy. Manana ny fampahalalana rehetra amin'ity lahatsoratra ity ianao: https://blog.desdelinux.net/kingsoft-office-en-espanol-le-mostramos-como-lograrlo/
Mikasika ny fametrahana ny rakibolana dia mila mankany amin'ity adiresy ity fotsiny ianao (http://wps-community.org/download/dicts/) ary sintomy ny fonosana .zip en_ES. Avy eo esorinay izy io ary adikao ilay fampirimana. Manaraka izany dia tsy maintsy miditra amin'ny alàlan'ny superuser isika na root amin'ny / opt / Kingsoft / wps-office / office6 / mui ary apetaho ao ilay lahatahiry misy ny fanamarihana ny tsipelina. Manantena aho fa manampy anao izany.
Ity misy lahatsoratra iray hafa nataon'ny zazalahy mba handikana ny fandikana amin'ny teny Espaniôla
Ity ny statin'ny fandikan-teny an'ny Office WPS:
Yoyo dia hoy izy:
Eto ve no aparitaka ny lelafo?
Valio i Yoyo
Amin'ny hevitra 10 azafady 😛
Inferat Vladimirvr Vras dia hoy izy:
Tara vao tonga izahay…. Saingy, apetaho fotsiny ny popcorn dia vita ny ...
Valiny tamin'i Inferat Vladimirvr Vras
Carlos Felipe dia hoy izy:
Tsy tera-tany aho, Breziliana aho, saingy fantatro fa voalaza ireo fitsipika hoe "nanapa-kevitra", ataovy ny mpanera.
Tsy tompon-tany aho, Breziliana aho, saingy fantatro fa araka ny lalàna dia voalaza fa "nanapa-kevitra", avy amin'ny matoanteny manana.
Valiny tamin'i Carlos Felipe
Mampiasa Elementary ve ianao ?. Ahoana ny fomba fiasa? Ampy ve ny fampiasana azy ho rafitra lehibe, arakaraka ny fomba ahitanao azy hatreto?
WPS Office dia manana fifandraisana misy sary izay mifanaraka tsara amin'ny estetika nomen'ny Elementary OS. Ireo mpampiasa OS Elementary dia mampiasa azy io matetika.
Fampianarana hanovana ny Office WPS amin'ny Elementary anao.
Manoro hevitra anao aho handika izany amin'ny teny Espaniôla ihany koa:
// ///.... // // ///. ///
Ny fisie Mircosoft dia manokatra 99% tsara ho anao. Raha handeha hiasa amin'ny fisie propriétaires ianao dia omeko anao izany.
Amin'izao fotoana izao dia tsy manana ny fanohanan'ny ODT izany, noho izany dia ampirisiko ny Google Doc na LibreOffice hiasa amin'ireo endrika ireo.
Miala tsiny Mariano fa ny rafitra fandidiana no tiako horesahina.
Mbola tsy manohana antontan-taratasy misokatra (odt) ve ity kinova ity?
Raha fanapahan-kevitry ny orinasa indrisy.
Manantena aho fa ny orinasa sinoa dia voatery mampiasa ny endrika ODT amin'ny tsy fahatomombanana. Izany hoe terena hampiasa azy io satria orinasa sy governemanta maro no mampiasa azy.
Governemanta miaraka amin'ny fanohanan'ny ODT: Brezila, Russia, Uruguay, sns.
Orinasa: Google, FireFox, sns
Mampalahelo fa mbola miankina amin'ny Office ihany i Però noho ny Microsoft (ary efa niresaka an'izany aho tao Ity lahatsoratra ity).
PS: Manana tranga CD 3 miaraka amin'ny ankamaroan'ny warez sy freeware aho (ireo kapila fametrahana Debian, Ubuntu, CentOS ary Slackware) no hany ananako maimaim-poana.
misy kalalao dia hoy izy:
WPS dia tsy misy ilàna azy mihitsy ao amin'ny fitantanan'i UK satria nivily ny lamosin'ny birao izy ho an'ny odt.
Ohatra iray tokony harahin'ny firenena maro, arahaba soa britanika.
Valiny amin'ny MOL
Kudos ho an'ny Angletera noho ny tsy nilefany tamin'i Microsoft (ary tsy toa an'i Munich sy Chile, izay resin'ny Microsoft ankehitriny).
Tsotra toy ny manokatra azy ireo amin'ny google docs ary mamadika azy ireo amin'ny endrika microsoft hafa. Tsy hoe sarotra izany
Salama, ny olako dia ny fanavaozana farany tsy azoko ampiasaina ny teboka hanasarahana ny desimaly (mamela ahy fotsiny ny koma). Azo alamina ve izany mba hahafahako mampiasa ilay teboka? MISAOTRA
Kalevito dia hoy izy:
Azo apetraka amin'ny terminal ve izany?
Rehefa mankany amin'ny bokotra misintona aho dia mitarika ahy any amin'ny pejy hafa misy ny fisie deba rehetra. Mila misintona sy mametraka azy rehetra ve aho?
Valiny amin'i Kalevito
Raha mila mampiasa programa ianao hametrahana ireo fonosana WPS Office toa an'i Gdebi.
Tsy mahalala fomba hafa indrisy aho, satria ny WPS Office dia manana kinova Alpha 15 ho an'ny GNU / Linux.
erik danny dia hoy izy:
Mahafinaritra tokoa ny mivezivezy x wps
Mamaly an'i erik danny
Nicolai Tassani dia hoy izy:
Nanana ny kinova teo aloha aho ary nesoriko satria tsy afaka nametraka ny GUI tamin'ny fiteniko aho. Izao mahita an'ity pikantsary ity dia hametraka azy indray aho. Misaotra amin'ny vaovao!
Valiny tamin'i Nicolai Tassani
Napetrako tao amin'ny opensuse 13.1 fa mbola tsy mahita fomba hampitana azy amin'ny teny espaniola aho, hitako izany tamin'ny ubuntu sy ny Fedora raha afaka mametraka ny fonosana amin'ny fiteny ianao ...
Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana ny Office WPS amin'ny teny Espaniôla. Avelako ao anaty rohy ianao.
. Avelako ao anaty rohy ianao. Ho anao hametraka ny interface amin'ny Espaniôla
Ao amin'ny lahatsoratra, tsy hita ny tutorial fampidirana: v
Mamaly an'i Joao
Tsara ny tolakandro, Mariano. Navoaka sahady ny WPS 16 alpha 1. Raha tsy manao zavatra hafa ankoatry ny fametrahana azy dia apetrako ho azy amin'ny teny espaniola ary haingana kokoa (farafaharatsiny ao amin'ny pc-ko) noho ity kinova 15 ity.
Mamaly an'i kalevito
Camila dia hoy izy:
Rehefa mitazona tsara ireo rakitra aho, rehefa te-hamonjy azy ireo dia milaza amiko fa tsy manana endrika tsy manam-paharoa izy ireo, ary fampitandremana izany ary tsy hitako ny vahaolana amin'ny internet.
Valiny amin'i Camila
JuanUK dia hoy izy:
Inona no distro ampiasainao? Voantso mafy ho amin'ny fiheverana aho.
Mamaly an'i JuanUK
Elementary OS dia fizarana fanta-daza miaraka amin'ny rivotra Mac OS.
Gabriela Red dia hoy izy:
Salama, manana fisalasalana aho.
Ampidiro ny WPS ho an'ny Ubuntu 16.04 ary rehefa manokatra fisie excel ho Spreadsheets aho dia manokatra azy tsara nefa rehefa nampiditra url tao anaty antontan-taratasy aho dia tsy haiko ny manokatra azy ireo.
Misy torohevitra, valiny, tolo-kevitra ve?
Valiny tamin'i Gabriela Rojo
Intern dia hoy izy:
Ao amin'ny Office WPS, inona no fahazoan-dàlana ampiasaina raha orinasa izy io?
Valiny tamin'i Intern
Manoro hevitra anao ny hampiasa ny WPS Office Professional izay fanontana orinasa https://www.wps.com/wps-office-business
Afaka mampiasa lisansa manokana ianao, orinasa iray, saingy ara-dalàna ve ????
CRAL dia hoy izy:
orinasa iray afaka mampiasa ny fahazoan-dàlana manokana amin'ny biraon'ny wps?
Valiny amin'ny CRAL
Manahaka an'i Linus Torvalds: mamorona rafitra fiasao anao avy amin'ny rangotra (VII)
Azo ampiasaina amin'ny ratsy ve ny rindrambaiko maimaimpoana? Fihodinana faha-2 (Lahatsoratra tena matotra, momba ny Diaspora, ISIS ary ny fampihorohoroana)